Grab နဲ့ Essilor တို့ ပူးပေါင်းပြီး ယာဉ်မောင်းတွေ မျက်စိကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း Grab နဲ့ Essilor တို့ ပူးပေါင်းပြီး ယာဉ်မောင်းတွေ မျက်စိကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးမယ်
The driver ofaGrabCar,aservice under the Grab app that allows passengers to bookachauffeured ride forapre-agreed fee, waits in the Telok Ayer area in an arranged photograph in Singapore, on Wednesday, Oct. 19, 2016. Grab is ridingaSoutheast Asian ride-hailing arena with some 620 million people, forecast to grow more than five times to $13 billion by 2025. Photographer: Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images
Grab နဲ့ Essilor တို့ ပူးပေါင်းပြီး ယာဉ်မောင်းတွေ မျက်စိကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးမယ်
မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Grab တက္ကစီ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေး စက်ကိရိယာတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ Essilor ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံက Grab တက္ကစီယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အစီအစဉ်ဟာ အမြင်အာရုံ အားနည်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ မျက်စိကျန်းမာရေး စီမံကိန်း (NEPH) ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ Grab နဲ့ Essilor တို့ရဲ့ မျက်စိကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်ကို စတင်မိတ်ဆက်တဲ့ ပထမဆုံး ဈေးကွက်ဖြစ်ပြီး အငှားယာဉ်မောင်း ၄၀၀ ဦးကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးခဲ့ပြီး အမြင်အာရုံ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့ အစီအစဉ်ကို လစဉ် ရက်သတ်မှတ်ပြီး ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ ယာဉ်မောင်း ငါးဦးမှာ တစ်ဦးဟာ လမ်းတွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ကြောင်း၊ Grab နဲ့ အခုလို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တာဟာ ဒီပြဿနာကို အရှေ့တောင်အာရှမှာ လူတွေ ပိုအာရုံစိုက်လာအောင် လုပ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း Essilor ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ဖြစ်သူ ဆောဂါတာ ဘန်နာဂျီးက ပြောပါတယ်။
Grab နဲ့ Essilor တို့ ပူးပေါငျးပွီး ယာဉျမောငျးတှေ မကျြစိကနျြးမာရေး စောငျ့ရှောကျပေးမယျ
မိုဘိုငျးငှပေေးခမြှေုစနဈ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတဈခုဖွဈတဲ့ Grab တက်ကစီ ဝနျဆောငျမှုနဲ့ မကျြစိကနျြးမာရေး စကျကိရိယာတှေ ထုတျလုပျတဲ့ Essilor ကုမ်ပဏီတို့ ပူးပေါငျးပွီး မွနျမာနိုငျငံက Grab တက်ကစီယာဉျမောငျးတှရေဲ့ မကျြစိကနျြးမာရေးကို စောငျ့ရှောကျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခု အစီအစဉျဟာ အမွငျအာရုံ အားနညျးမှုကွောငျ့ ဖွဈလာနိုငျတဲ့ ယာဉျအန်တရာယျ ကငျးရှငျးရေး လုပျဆောငျနတေဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနရဲ့ နိုငျငံလုံးဆိုငျရာ မကျြစိကနျြးမာရေး စီမံကိနျး (NEPH) ကို ပံ့ပိုးကူညီပေးတဲ့ လုပျဆောငျခကျြ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံဟာ Grab နဲ့ Essilor တို့ရဲ့ မကျြစိကနျြးမာရေး ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျမှု အစီအစဉျကို စတငျမိတျဆကျတဲ့ ပထမဆုံး ဈေးကှကျဖွဈပွီး အငှားယာဉျမောငျး ၄၀ဝ ဦးကို စမျးသပျစဈဆေးပေးခဲ့ပွီး အမွငျအာရုံ စမျးသပျစဈဆေးတဲ့ အစီအစဉျကို လစဉျ ရကျသတျမှတျပွီး ပွုလုပျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ စဈတမျးတှအေရ ယာဉျမောငျး ငါးဦးမှာ တဈဦးဟာ လမျးတှကေို ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မမွငျကွောငျး၊ Grab နဲ့ အခုလို ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျတာဟာ ဒီပွဿနာကို အရှတေ့ောငျအာရှမှာ လူတှေ ပိုအာရုံစိုကျလာအောငျ လုပျဖို့ အရေးကွီးတဲ့ ခွလှေမျးဖွဈကွောငျး Essilor ရဲ့ တာဝနျရှိသူတဈဦး ဖွဈသူ ဆောဂါတာ ဘနျနာဂြီးက ပွောပါတယျ။
Previous article နည်းပြမော်ရင်ဟို မန်ယူနဲ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုး
Next articleတောင်ကိုရီးယား ဆေးရုံ မီးလောင်မှု ၄၀ ကျော် သေဆုံး